जनयुद्धको अस्तित्व के ?.......... - Bagaicha.com
जनयुद्धको अस्तित्व के ?……….
RK ३ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १६:४६
०३ जेठ २०७५, काठमाडौँ – नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको विषयमा अन्य पार्टीका नेताहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसी भने, ‘माओवादी एमाले नै हुनु थियो भने जनयुद्धको अस्तित्व के ?’ उनी भन्छन्, ‘एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्वाचनको बेलामा एक हुन्छौँ भनेर जनतासामु जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए, त्यो नैतिक हिसावले पु्रा गर्नैपर्ने थियो र उनीहरुले पुरा गरेका हुन् । यो एकताले देशमा दुई पार्टी प्रणाली लागु हुन्छ । यो देशको लागि राम्रो पक्ष हो । यसले देशको विकासमा धेरै नै सहयोग पुर्‍याउँछ। यदि यो दीर्घकालिन रुपमा भयो भने देशमा हामीले सोचेजस्तो विकास पक्कैपनि हुन्छ। कांग्रेस नेता केसी भन्छन्, ‘यो एकताभन्दा अगाडि जनयुद्धको विरुद्धमा बोल्दै आएको एमालेले जनयुद्धलाई समर्थन गर्नु नै थियो भने किन विरोध गर्नु । एमाले मोआवादीसँग मिल्नु नै थियो भने एमालेकोे अस्तित्व के? अनि माओवादी एमाले नै बन्नु थियो भने जनयुद्धको अस्तित्व के ?’
एमाले माओवादी एकता फलदायी बनोस भन्छन्, काँग्रेस प्रवक्त विश्वप्रकाश शर्मा उनी भन्छन्, लोकतन्त्रमा विभाजन र संयोजन सामान्य हो। एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई हामीले स्वागत गरेका छौँ र शुभकामना व्यक्त गरेका छौँ, यो एकतासँगै पार्टीमा दम्भ नहोस। यसलाई सुदख रुपमा हेर्नुपर्छ र उहाँहरुले त्यसलाई दिगो बनाउन सक्नुपर्छ । यो एकता नेपालको लोकतन्त्र र विकासको लागि फलदायी हुन सकोस।’